मेरिल्याण्ड क्यासिनोमा नेपालीको संकास्पद निधन
Visitor from US is reading who is this Amaresh Singh?
Visitor from US is reading मेरिल्याण्ड क्यासिनोमा नेपालीको संकास्पद निधन
Visitor is reading Database of Nepalese Trees,plants & herbs
Visitor is reading kathmandu ma Taxi लिदा ध्यानदिनुहोस् - HQ
Visitor is reading BOOKS ON DARK MATTER
Visitor is reading Java le DusPutra (tenson) diyo!
Visitor is reading "ID" on netflix
Visitor is reading Travel on F1 when I-20 is about to expire in2months.
Posted on 01-14-20 8:55 AM Reply [Subscribe]
विजय थापा ,डिसी । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड स्थित एमजीएम नेसनल हार्बर होटल तथा क्यासिनो(जुवाघर)मा गितान्जय ढकाल नाम भएको नेपाली युवाको निधन भएको दुखद समाचार प्राप्त भएको छ । श्रोतका अनुसार गत जनवरी १० का दिन उक्त घटना भएको बुझिएको छ ।
अन्दाजी करिव २८-३० बर्ष उमेरका स्व गितान्जय ढकाल मेरिल्याण्ड निवासी हुन् । यस बिषयमा मेरिल्याण्ड राज्यको प्रिन्स जर्ज काउन्टीका प्रहरीले अनुसन्धान गरि रहेको छ । यसको लागि प्रिन्स जर्ज काउन्टीका प्रहरीका अनुसार जासुस शेफर्डले उनको यो मुद्धा हेरी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
प्रहरीले उनका आफन्तलाई खोज तलास गर्ने काम प्रहरीले गरि रहेको बुझिएको छ भने उनको मृत शरीरलाई बाल्टिमोरमा राखिएको समेत जानकारी प्रिन्स जर्ज काउन्टीका प्रहरीले दिएका छन् । आफ्ना परिवार बाहेक अन्य कसैलाई पनि यस बारेमा जानकारी दिने नमिल्ने प्रहरीले बताएका छन् ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा (अनुहार किताब)उनको खाता गीतन उप्रेती रहेको छ । यस बारेमा बिस्तृत जानकारी लिन जासुस (डिटेकटिभ) शेफर्ड संग सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
मृतकका आफन्त ,साथीभाई ,इष्टमित्र ,छरछिमेकि तथा जो सुकैले पनि उनका परिवार सम्म पुर्याउन पिजीपिडी/सिआईडी – ३०१ -७७२-४९२५(301- 772 -4925 ) अथवा मा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
उनको कसरी निधन भएको हो भन्ने बारेमा प्रहरीले जानकारी दिएका छैनन भने नजदिकका नातेदार र परिवारलाई मात्र भन्न सकिने भएकोले यस बिषयमा थप जानकारी लिएर आउने छौ ।
यस बिषयमा नेपाली मूलका मेरिल्याण्ड राज्यका बिधानसभा सदस्य ह्यारी भण्डारीको कार्यालयसंग प्रिन्स जर्ज काउन्टीका जासुस शाखा (डिटेकटिभ ब्रान्च बीच सम्पर्क भै रहेको छ ।
भण्डारीले रिड नामक डिटेकटिभ (जासुस )संग सम्पर्क गरेको र उक्त मुद्धाको मुख्य व्यक्ति (नेतृत्व )शेफार्ड संग बिस्तृत रुपमा भोलि जनवरी ११ का दिनमा कुरा गर्ने जानकारी दिनु भयो । यस बिषयमा कुनै पनि जानकारी चाहिएमा सभासद भण्डारीको मेरिल्याण्डको राजधानी एनापोलिस स्थित संसदीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने भण्डारीको कार्यालयले बताएको छ ।
सम्पर्क संख्या ३०१ – ८५८ – ३५२६ ,४०१ -८४१-३५२६ तथा टोलफ्री (कर नि:शुल्क)संख्या -१-८०० -४९२ -७१२२ -एक्सटेन्सन ( विस्तार )३५२६ मा गर्न सकिने छ ।